Njedebe nke ihe ndi ozo | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Mmebi nke ihe okike
Na mgbawa igwe mmadu na ntoputa nke ohuru ndị dike aku na uba, mmetụta nke ihe a kpọrọ mmadụ na gburugburu ebe obibi enwekwu site na ụbọchị. Ruo n'ókè nke na ike ọgwụgwụ nke ụfọdụ ihe onwunwe eke, emere maka mmeghari ohuru na nke enweghi ike imeghari.
La oha mmadu adighi aghaghachi: karia anyi bu, ka anyi na etinyekwu mgbali na anyi ihe onwunwe eke N'oge na-adịghị anya anyị ga-erute nde 7.000 bi na ya ... ụbọchị ọ bụla a mụrụ mmadụ 200.000 na agbakwunye na ngụkọta nke ọnụ ọgụgụ mmadụ zuru ụwa ọnụ (ịgụta ọmụmụ na ọnwụ).
A na-atụ anya na n'afọ 2050, a ga-enwe nde mmadụ 9.000, ma na 2008 ọ dọrọ aka ná ntị banyere impacto obibi nke mmadu na mbara ala, nke meworo okpukpu abụọ n'ime afọ 45 gara aga, n'ihi mmụba ọnụ ọgụgụ mmadụ na mmụba nke oriri onye obula.
Ọ bụrụ na anyị ewere afọ 1963 dịka nrụtụ aka, ndị Producción ulo oru n'ụwa nile mụbara Wezuga, n'agbanyeghị ụfọdụ mgbanwe n'ihi nsogbu mmanụ na nsogbu ego. Ọnụego nke eto N'ime afọ 25 gara aga ọ bụ 2,9% na nkezi kwa afọ (ọ gbabala abụọ n'ime afọ 25). Uto onu ogugu kwa agwaOtú ọ dị, ọ dị nwayọ n'ihi nke eto igwe mmadu: naanị 1,3% kwa afọ (ọ okpukpu abụọ n'ime afọ 55).
Ozi ndị ọzọ - Ireland iji nye ike ikuku na UK
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Noticias » Mmebi nke ihe okike
Ihe ndị mere na oké osimiri na-atụfu ihe otiti